Amanzi abe yinto enjalo yobomi kwimpilo yemihla ngemihla, kaninzi asinakucinga ngento yayo. Okwangoku, ubukho bobubomi ngaphandle kwamanzi akunakwenzeka. Amanzi acocekileyo kwimpilo nobuhle akanakwenzeka. Ngokwalo, amanzi akanalo nayiphi na isondlo. Kodwa ke, oku kubaluleke kakhulu "umkhiqizo wokutya".
Amanzi anoluhlu olukhulu "lwemisebenzi" emzimbeni wethu. Yenza ininzi yeseli nganye emzimbeni. Kwaye nazo zonke iintlobo zamanzi - i-blood, i-lymph, i-juices digestive, i-sweat, iinyembezi ne-saliva. Kule nkalo, ngamanzi anika iiseli izondlo, ukulandelela izinto kunye ne-oxygen. Iyakususa iindawo zokubaluleka komsebenzi obalulekileyo, ukugcina oko kubaluleke ngokubaluleka kokubunjwa kwemeko yangaphakathi yendalo. Amanzi ahlahlela umzimba ngokufudumala kwaye avuseleleke kubanda, enika ibhalansi yeqondo lokushisa. Amanzi anciphisa amehlo, umlomo kunye nemigodi yamanzi. Ulungelelanisa amajoyina kwaye wenza njengento yokuxakeka, ukukhusela izitho zangaphakathi.
Kwaye ukubonakala komntu ngezindlela ezininzi kuxhomekeke kumanzi. Umzekelo, ubuso bethu. Utshintsho lwemozulu, inkompo ekhuthazayo yekhofi ezinamandla ekuseni kunye nokufunwa okufunekayo kakhulu - konke oku akuyona ndlela efanelekileyo yokuchaphazela imeko yesikhumba. Ukuba naye unobunzima bokunqongophala kwamanzi, ulusu oluqhenqileyo, ukuma, i-penchant for acne, wrinkles kunye ne-flabbiness yesikhumba kunikezelwa kuthi. Indlela ebhetele yomzabalazo kule meko iya kuphucula isikhumba, zombini zangaphandle (iikram) kunye zangaphakathi (ukutya okwaneleyo kwamanzi).
Enye ingxaki yehlabathi lanamhlanje likhulu kakhulu kunye nokukhuluphala. Kwaye ekulwa nalo, amanzi adlala indima ebalulekileyo. Kuyaziwa ukuba ukusela amanzi okwaneleyo kunciphisa ukulamba, kukukhuthaza ukutshiswa kwamafutha angaphezulu kunye nokutshisa ngokuchanekileyo kweekhalori ngexesha loqeqesho ngemisebenzi yemihla ngemihla.
Ukuntuleka kwamanzi emzimbeni kukhokelela ekudambiseni amanzi. Ukudambiswa kwamanzi kuya kubangela ukuphuhliswa kwezifo ezininzi. Isifo sesifo esingapheliyo, ukuxinezeleka, izifo ezidibeneyo, ukuphazamiseka kokugaya ukutya, ukungasebenzi kwemfucuza. Kwaye akusiyo uluhlu olupheleleyo lweengxaki ezinokungabikho kwamanzi acocekileyo. Ukudakalisa isidumbu somzimba kuboniswa yimpawu ezilandelayo: intlungu emva okanye intlungu ehlanganyelweyo, ukukhwehlela owomileyo, ukusulela kweengcambu ze-urinary, ukungaphumeleli kwezintso, ukunyuka kwengcinezelo, ukuzitywa, ukuphathwa kwentloko, ukuxinwa, ukunyuka, isikhumba esomileyo.
Njengoko uyakubona, inani elaneleyo lamanzi ngeendlela ezininzi isiqinisekiso sempilo yethu. Ngoko umbuzo: "Ukusela okanye ukusela?" kunikezelwa ngokungenammiselo. Ewe, "uphuze"! Kufuneka kuphela ukuba uchaze ukuba uphuze kangakanani kwaye uphi na amanzi okusela. Ubomi obuqhelekileyo, ukulahleka kwamanzi ku-2.5 ilitha ngosuku. Ngoko ke, kufuneka uphuze umyinge we-6-7 iiglasi zamanzi ngosuku. Kodwa ekushiseni, ngokuzikhandla ngokomzimba, ngexesha lokukhulelwa, kunye nokuhlala rhoqo kwigumbi elinesimo-moya, ukulahleka kwamanzi kuyenyuka. Kuthetha, kwaye kufuneka, naye. Kule meko, umntu akakwazi ukugxila kuphela ekubonakaleni kwento yokoma. Kubonisa ukuba umzimba usele ungcolisiwe, oko kukuthi, unobunzima bokunqongophala kwamanzi.
Simele sivume ukuba ngokuqhelekileyo sihlawula ingqalelo kwizinto zokutya, kodwa kuncinci ukucinga ngombuzo kunokucima ukoma lwakho. Okwangoku, malunga netoni yamanzi idlula emzimbeni womntu minyaka yonke. I-arsenal yamanzi amaninzi okusela ukukhulula ngokwaneleyo. Kodwa ngokukhawuleza ndifuna ukuphawula ukuba iziphuzo, kubandakanywa ubisi, izandi kunye notywala, ngokwenene, zizinto zokutya. Ziyikhalori, zitshintshe unxano lwabo. Ukongezelela, utywala, itiye okanye ikhofi, ngokukodwa, igalelo ekudambiseni amanzi. Kuyacaca ukuba kufuneka uphuze amanzi. Kodwa ngubani na?
Amanzi okupompoza "izono" eziphakamileyo kwiisaliti ezahlukahlukeneyo, isinyithi esinzima, ii-microbes kunye nezinto ezinobuthi. Kwaye nokusebenzisa i-chlorine, nangona yenza amanzi ompompoza okukhuselekileyo ekukhuselweni kwezifo zamathumbu emathunjini, kusekho ingozi enkulu kwimpilo.
Amanzi avela kwimithombo evulekileyo-imithombo, imilambo, eninzi ebona imimangaliso, ingaba yingozi. Ngenxa yokungakhuselekanga ukusuka ekungeneni kwamanzi angaphezulu, ingaba nezifo kunye nezifo ezinobuthi. Abaninzi banamathele ngamanzi amanzi amanzi, kwaye rhoqo. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba amaninzi kula manzi ayenyango. Ukufumana kwabo ixesha elide ngaphandle kokuyimfuneko ngokwenene kunokuyenza ingozi enkulu. Okukuphela kwendawo yetafile yamaminerali.
Kubalulekile ukuba amanzi ahlambuluke kwaye aphephile, kunye nomxholo wezobugcisa wamaminerali. Ezi zidingo zidibene neninzi yamanzi e-table mineral water, amanzi aphuza amabhodlela kunye namanzi, ahlanjululwe ngoncedo lwezihlunu zasemakhaya. Zininzi iindlela zokuhlambulula amanzi. Enye yeendlela eziphambili zokucocwa yinkqubo ye-reverse osmosis. Le ndlela yokuhlanjululwa kwamanzi ayifani ngokungafanelanga nomsebenzi weentso. Ngale ndlela, i-membrane ephezulu kakhulu yokususa i-osmosis isusa ii-particle zangaphandle kwimpompo yamanzi, ubukhulu bayo abugqithisi ubukhulu be-molecule. Enye into malunga neenkqubo zokususa i-osmosis kukuba zenza amanzi amathintelo aqhelekileyo afana nomgangatho kunye nokusetyenziswa kwamanzi kwimithombo ephakamileyo yeentaba. Amanzi okupompoza amanzi angadakwa ngokuthe ngqo kwipompo. Amava okuqinisekisa ukuba okuphekwe ekutya kwamanzi acocekileyo kuninzi kakhulu, kwaye iibheke zombane kunye nabenzi beefowuni abenzi isilinganisi. Kufuneka kusetyenziswe ukuhlamba imifuno neziqhamo. Kwaye kunye neenkqubo ezahlukeneyo zokucoca kunye nokuhlamba.
Ukusela kufuneka kube ngamanzi ahlambulukileyo kwimpilo kunye nobuhle kwiindawo ezincinci kulo lonke usuku. Ukuba phakathi kokutya ofuna ukuyidla, phuza ngakumbi amanzi. Yaye ivakalelwa yindlala iya kupheliswa. Kwakhona kunceda ukusela iglasi yamanzi acocekileyo ngaphambi kokutya. Kuya kuqinisa impilo yakho kwaye kuphuculwe ukugaya. Kulabo abazibophelela ngokwabo ngemithwalo yemvelo, ukusetyenziswa kwamanzi kufuneka kunyuswe: enye iglasi yamanzi nganye ihafu yure. Yaye ukuba isinkwa siphezu kwentloko, ke amanzi ahlanzekileyo ngumqinisekiso wezempilo kunye nobuhle.
Ukuhlafuna i-gum: iinzuzo kunye nenzakalo
Ukusetyenziswa kwe laser fractional kwi cosmetology
Iklabishi i-pudding ne-bacon
Intando emithathu ebomini bukaSophie Marceau
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-aragonite
I-Horoscope ngo-2010: I-Sagittarius, i-tiger
Unokumnceda njani umntwana ukuba athole inyo ekhawulezayo
I-Thuya, izakhiwo eziwusizo